Best Dental Clinic in Yangon - Latha Dental Clinic
Best Dental Clinic in Yangon
Latha Dental Clinic ကို လသာမြို့နယ်မှာ ဆရာဝန်အစဉ်အဆက် ငါးဆက်ဖြင့် နှစ်ပေါင်း (၇၀) တိုင်ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လာရောက်တဲ့ လူနာတိုင်းကိုလည်း မိသားစုသဖွယ် ပြုစုဂရုစိုက်ကုသပေးနေပါတယ်။
Operation Dental Microscopes
ရောဂါတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့လျှင် အရေးကြီးဆုံးကတော့ အသေးစိတ်ကုသမှုပါ။ ရောဂါတွေကို ဆရာဝန်တွေက ကုသပေးသလို ဆရာဝန်တွေကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တာဟာ အဆင့်မြင့်ကုသမှု စက်ကရိယာတွေပါ။ မိမိမှာ ဘာရောဂါဖြစ်နေလဲ ? ဘယ်လိုကုသမှုမျိုး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမလဲ? စတဲ့ သာမာန်မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်တဲ့ သွားရောဂါ ပြဿနာတွေကို အသေးစိတ် တိုင်းတာစစ်ဆေးပေးနိုင်မယ့် Operation Dental Microscopes (ခံတွင်းအဏုကြည့်မှန်ပြောင်း) Latha Dental Clinicမှာ ရှိနေပါပြီ။
Latha Dental Clinicတွင် လူနာများတစ်စုံတစ် ရာပြဿနာမရှိရလေအောင် အတွေ့အကြုံရင့် ဆရာဝန်ကြီးများက အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် သာမာန်မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်တဲ့ သွားကြောမျှင်လမ်းကြောင်းတွေကို အသေးစိတ်ကုသမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
တိုင်တေနီယမ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဝက်အူအရစ်ပုံစံ သွားအမြစ်တုကို သွားဖုံးအတွင်းသို့ တစ်ချောင်းတည်း ထည့်သွင်းစိုက်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သွားပေါ်အောင်ပြုံးနိုင်ဖို့ သွားတွေဟာ မညီညာ၊ ကျဲနေတာကြောင့် စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေပါက Invisalign လို့ခေါ်တဲ့ အကြည်ရောင် သွားစွပ်လေးဖြင့် သက်တောင့်သက်သာ သွားညှိလို့ရနေပါပြီ။
Root Canal Treatment (သွားအကြောထုတ်ပေးခြင်း)
ROOT CANAL TREATMENT ဆိုတာကတော့ ပိုးစားပြီး ရောင်ယမ်းနေသော သွားများ၊ အလွန်အမင်း သွားကိုက်နေခြင်း၊ သွားအမြစ်ထိပ်တွင် ပြည်တည်နာဖြစ်နေခြင်း၊ ပိုးစားပြီးပုပ်နေတဲ့ သွားရှိ အကြောများကို အကြောထုတ်ကိရိယာအသုံးပြုပြီး အကြောထုတ် ကုသခြင်းကို ဆိုပါတယ်။
June 25, 2021 24856 Views
June 25, 2021 24919 Views
June 25, 2021 24948 Views
June 25, 2021 24949 Views
June 25, 2021 24865 Views
June 25, 2021 24939 Views
Get Started With Latha Dental Clinic
Latha Dental Clinic ရဲ့တည်နေရာလေးကတော့ အမှတ် ၆၆၁၊ ပထမထပ်၊ လသာနှင့် မဟာဗန္ဓုလ လမ်းထောင့်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် သွားနှင့် ခံတွင်းရောဂါများကို ကုသနိုင်ပါတယ်။
Great Words about Latha Dental Clinic
The doctor is very professional in this dentist field. It has been 20years experience and we all our family members have been served by this docor. Thanks!
Latha Dental's Client